यस्तो छ,माओवादी केन्द्रका आठ कमजोरी | .:: Welcome to Saurahaonline.com
एजेन्डा बुझाउन नसक्नु
माओवादी १० वर्षे जनयुद्धले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी जस्ता महत्वपुर्ण मुद्दा ल्यायो । माओवादीले सरकारमा हुँदा पछिल्ला सरकारभन्दा धेरै राम्रा काम पनि ग¥यो । तर, पार्टीले आफ्ना एजेन्डा, आफूले गरेको कामका बारेमा जनतामा बुझाउन सकेन । सोही कारण माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन सकेन । प्रचण्डले पनि पटक–पटक भन्ने गर्नुहुन्छ– ‘अरूले पिठो पनि बिक्री गरे, हामीले बास्मति चामल पनि बिकाउन सकेनौँ ।’ पंक्तिकारलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, माओवादीले आफ्ना एजेन्डा, सरकारमा हुँदा गरेका राम्रा कामको प्रचार मात्र गरेको भए स्थानीय तहमा राम्रो स्थान हासिल गर्न सक्थ्यो । माओवादी स्वार्थका कारण बिग्रियो । अध्यक्षले पनि बैठक, भेला, प्रशिक्षणमा पटक–पटक यी विषय उठान गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिक, सामाजिकस्तरबाट यसको व्याख्या भएको छैन । माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता समाजशास्त्रको व्याख्या गर्न जरुरी नै ठान्दैनन् । माओवादी स्वार्थी छ । ऊ अरूको हित चाहँदैन । सहकर्मी साथीको मनोभावना पनि बुझ्दैन । पुँजीवाद र समाजवादी विचारलाई बुझ्न नसक्दा माओवादी जनतासम्म पुगेन । आफूलाई मात्र केन्द्रमा राख्यो ।
नयाँ सदस्यलाई सिद्धान्तमा ढाल्न नसक्नु
माओवादी एकीकृत र ध्रुवीकृत हुन थालेका छन् । धु्रवीकरण माओवादी घटकबीच नै भएको छ । यो स्वाभाविक हो, यसलाई सहज रूपमा बुझ्न र बुझाउन पनि सकिन्छ । पछिल्लो समय माओवादीमा गैरमाओवादीको प्रवेश पनि हुन थालेको छ । गैरमाओवादी पनि एकीकृत र ध्रुवीकृत भएका छन् । माओवादीमा पुँजीवादी पार्टीको पनि आँखा पर्न थालेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । जति पनि प्रवेश गरे उनीहरूलाई माओवादीले पार्टी सिद्धान्तमा ढाल्न सकेन । माओवादीले गैरमाओवादीलाई पार्टीको सिद्धान्तमा ढाल्न नसकेकै कारण भद्रगोल अवस्था देखिएको हो । माओवादीमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने क्रम जारी नै रह्यो । कुन पात्रले निर्वाचन जित्न सक्छ, उसैलाई टिकट दिन थालियो । पार्टीभित्र कुन वर्ग हो, कुन विचार भएकालाई प्रवेश गराउने भन्नेजस्ता विषयमा कहिल्यै गम्भीर बहस भएन । गैरमाओवादीलाई सिद्धान्तमा दत्तचित्त बनाउन पुरानो मूलधारको माओवादी उदार र अग्रगामी हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन ।
पार्टीभन्दा व्यक्ति बलिया हुनु
मध्यमवर्गलाई आकर्षित गर्न नसक्नु
प्रतिस्पर्धी चरित्र नहुनु
जनयुद्धमा माओवादीको चरित्र जनपक्षीय नै थियो । सामाजिक आन्दोलनमा पार्टी सहभागी हुन्थ्यो । तर, शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी सामाजिक जीवनसँग जोडिएको छैन । उदाहरणका लागि माओवादीका धेरै नेता आफ्नो फोन उठाउनु हुन्न । २१औँ शताब्दी सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधि नै ठूलो शक्ति हो । तर, सूचना दिन नेताहरू चाहँदैनन् । कार्यकर्ताको गुनासो सुनिन्छ–‘हाम्रा नेताको फोन नै उठ्दैन । के भइरहेको छ कसरी थाहा पाउनु ?’ कार्यकर्ताले नेतासँग आफ्ना समस्या राख्ने र नेताले समाधानको पहल गर्न सक्नुपर्छ । फोन नै नउठाउने, उठाइहाले पनि मिटिङमा छु भनेर झट्ट राखिदिने व्यवहारले अब राजनीति चल्दैन । यस्तो व्यवहारले कसरी कार्यकर्ता र जनताले एकोहोरो माया गर्छन् ? विवाह, पूजाआजा, पास्नी, बिरामी हुँदा, मृत्यु संस्कारमा माओवादी नेता जाँदैनन् । सामाजिक सम्बन्धमा नेता नजोडिएपछि कसरी पार्टी बन्छ ? नेताले सभाहरूमा गरेको भाषणकै भरमा अब जनता कन्भिन्स हुँदैनन् । माओवादीमा पनि त्यही लागू भयो । माओवादी समाजसँग टाढा हुँदै गयो । समाजसँग कसरी जोडिने भन्नेबारे ध्यानै दिएन । कमरेड माओले ‘जनताको घरबाट सियो धागो पनि नलिनु भनेका थिए ।’ यसो सोच्दा माओले के भनेका होला भन्ने हुन्छ । तर, सियो र धागो नलिऔँ भन्नुको सैद्धान्तिक आधार धेरै ठूलो छ । माओवादीका सबै नेताले जनताको फोन मात्रै उठाइदिएको भए पनि एक हदसम्म पार्टी सुध्रिन्थ्यो ।
स्पष्ट कार्यदिशा नहुनु